Izindaba ze-Geo-Engineering - Unyaka Engqalasizinda - YII2019 - Geofumadas
Izindaba ze-Geo-Engineering - Unyaka Engqalasizinda - YII2019
Ngo-Okthoba, 2019 Ubunginiyela, Innovations, Microstation-Bentley
Kuleli sonto umcimbi ubanjelwe eSingapore Ingqungquthela Yonyaka Wengqalasizinda - I-YII 2019, ingqikithi yawo ephambili egxile ekuqhubekeni ubheke kwidijithali ngokugxila kumawele edijithali. Lo mcimbi ugqugquzelwa yiBentley Systems kanye namahlakani amasu e-Microsoft, Topcon, Atos kanye ne-Nokia; ukuthi kumfelandawonye onentshisekelo esikhundleni sokumane babelane ngezenzo, bakhethe ukwethula izixazululo ezinenani elihlanganisiwe ndawonye ngaphakathi kohlaka lwezindlela zenguquko yesine yezimboni esetshenziselwe ubunjiniyela be-geo, ikakhulukazi ezindaweni zobunjiniyela, ezokwakha, ukukhiqizwa kwezimboni nokuphathwa kwamadolobha edijithali.
Imizi, izinqubo kanye nesakhamizi.
Ngokwami, ngemuva kweminyaka eyi-11 yokubamba iqhaza ngezikhathi ezithile njengabezindaba noma amajaji kulo mcimbi, izinkundla zezimboni kube yilokho engikwazisa kakhulu. Hhayi ngoba okuthile okusha kufundwa ngqo, kepha ngoba lokhu kushintshisana kusivumela ukuthi sibone ukuthi izinto ziya kuphi. Akukho okwenzekayo kwezinye izimboni, kepha ngokuyisisekelo kulo nyaka kumakwe ukuqondiswa kwezinqubo kanye nesakhamuzi njengesikhungo sokunakwa; Ngeke kumangaze ukuthi wonke amathuluzi we-IT ale nkampani enziwe lula kulezi zihloko, kungxenyekazi yokumodela okwabelwana ngayo nokusebenzisana.
Izinhlaka eziyisithupha zomcimbi yile:
Amadolobha Wedijithali: Kulo nyaka lokhu engikuthandayo, okuzibophezele ekubuyiseleni emuva ngqo umncintiswano ngokuthi izimpahla ezisedolobheni zidlulela ngale kwe-GIS + BIM. Isiphakamiso senani sikwethula izinhlelo ezixhunyiwe nokugeleza okuhlanganisiwe esikhundleni sezixazululo eziningi, kuqondaniswe nokuqoqwa kwephothifoliyo esikubonile ngonyaka odlule kanye nokutholwa okusha okuthe esikhundleni sokucabanga ngokuhlanganiswa kwamamodeli wokuphathwa kwedatha wobunjiniyela kanye ne-geospatial, bafuna ukwenza kube lula ukumodeliswa kwamadolobha ngokombono ophelele, bacabanga ngezinqubo ezihlanganayo zalokho abantu abakuphethe ukuphatha edolobheni: ukuhlela, ubunjiniyela, ukwakhiwa nokusebenza.
Amandla nezinqubo zamanzi: Lesi sithangami sigxile ezinseleleni zokuziphatha kwezinsizakusebenza kanye nokulungiswa kwezimo zokugcina ukukhula kwesidingo Ukubheja kwenani kungukuthi izinqumo ezingcono zingenziwa kanjani ekuphathweni okuphelele kwamanethiwekhi wokusabalalisa, ukunikezwa ngokuphathwa okuzenzakalelayo.
Imizila nohambo: Izindlela zokwakha ezizenzakalelayo, imininingwane esheshayo yokwenza izinqumo, ukuphathwa kokufakwa kanye nokwehliswa kwezindleko ngaphansi kokuphathwa komjikelezo wempilo yezimpahla ezikhona nokwanda okusekelwe ekukhuleni kwamadolobha kuzoxoxwa lapha.
Ikhampasi Nezakhiwo: Lesi sithangami sifuna ukuxoxa futhi sibeke inselelo yokulingiswa kwezikhathi nokuhamba kwabantu. Ngokwengeziwe, ukuthi ukuphathwa kwedijithali kungaholela kanjani ekuguqulweni kwezixazululo zokuhamba emadolobheni.
Imigwaqo Namabhuloho: Lokhu kuzobonisa ukuthi ungazihlela kanjani kabusha izinqubo zokwakha nezinqubo usebenzisa izindlela zokwakha zedijithali kanye nokulingisa.
Ingqalasizinda Yezimboni: Lesi sithangami esivuthwe ngendlela efanelekile kwizisombululo zikaPlatoSight zokusetshenziswa kwamaphrojekthi enziwe ezinhlelweni zikagesi, uwoyela kanye nezokumbiwa phansi.
Kube yimfundiso ebukhali ukuthi inkampani ebiphethwe ngumndeni, esikhundleni sokuphumela obala, iphakamise kanjani ukuqinisa izimpahla zayo ukuthatha ubuhlakani bayo ekuvukeleni okulandelayo embonini, kuhambisane nezinkampani ezihola phambili ubunjiniyela (i-Topcon), ukusebenza (i-Nokia) nokuxhuma (i-Microsoft). Eminyakeni yamuva nje sibone ukuthi iProjectWise izoba yini ngokufinyelela kwenethiwekhi ye-Azure, kanye nePlantSight ebheke kuyo yonke imakethe yokukhiqiza yezimboni.
Kulo nyaka, ukumangala bekungekho okuncane, ngokuhlanganyela iBentley Systems - iTopcon, egxile ekwakheni izindlela ezintsha zokwakha ngokuya ngobuchwepheshe nokwenza lula izinqubo. Lesi sixazululo asiphumanga emkhonweni wehembe, kepha siwumphumela wesikhathi esingaphezu konyaka sokucwaninga nokusebenzisana kwabahlanganyeli abangaphezu kwama-80 phakathi kwezinhlangano zikahulumeni, izinkampani ezizimele kanye nochwepheshe abakade besebenzisa izixazululo ze-IT, imishini, izinqubo kanye nokuhle ukwenza emjikelezweni wempilo wamaphrojekthi amakhulu wengqalasizinda. Lokhu kuphathwe ngempumelelo Isikhungo Sokwakha, futhi umphumela uba Digital Ukwakha Umsebenzi DCW
Imisebenzi Yezokwakha Yedijithali, Kuvulekele zonke izinhlobo zamabhizinisi esimweni sesinguquko sesine sezimboni, kepha ikakhulukazi emkhakheni wezokwakha, izinkampani zingathuthukisa imisebenzi yazo yokwakha - ngokusebenzisa i-workflows yedijithali - ngokubambisana nethimba lochwepheshe ka DCW, yona ezohlinzeka nge-automation yedijithali kanye nensizakalo ebizwa ngokuthi yi- "twinning".
Ukwenza lo msebenzi wezimpawu womzimba phakathi kwenkampani yamakhasimende, Imisebenzi yokwakha eyidijithali, IBentley neTopcon, nabo bazofuna ukubeka phambili ukubeka imali yabo ekuthuthukiseni nasekuhleleni kabusha isoftware yokwakha. UGreg Bentley, isikhulu esiphezulu seBentley Systems akakwazanga ukukubeka kangcono:
“Ngenkathi iTopconcon futhi sibona nethuba likaProductering lokuthi ekugcineni sisebenze ukulethwa kwamaphrojekthi amakhulu, sayethembisa ngokulandelana ukuqedela izidingo zazo zesoftware. Eqinisweni, amakhono ethu esoftware entsha enza sikwazi ukwakha amawele edijithali: Umongo wedijithali oguqulwayo, izakhi zedijithali nokulandelana kwezikhathi kwedijithali. Okusele, ngokuba yidijithali ekwakhiweni kwengqalasizinda, ukuthi izinqubo zabantu nabakhi zisebenzisa ubuchwepheshe. Mina noTopcon sithembise imithombo yethu eminingi emihle, ochwepheshe abanolwazi kwezokwakha kanye nesoftware, ukusebenzela ihlombe nehlombe, ngezigqoko zokuvikela, ukusungula ukuhlanganiswa okudingekayo kwedijithali. Inhlangano ehlanganyelwe yeDijithali Construction inokuphatha okuphelele nokuzibophezela kwemali ezinkampanini zethu ezimbili, iphindaphindeka amandla ayo ehlukile ukusiza ukusiza amandla weProatia ukuvala igebe lezingqalasizinda emhlabeni.
Okuningi kusuka ku-Digital Twins
Umqondo we-Digital Twin uqhamuka ekhulwini leminyaka elidlule, futhi yize ubungavuswa njengemfashini edlulayo, iqiniso lokuthi abaholi bezimboni abanethonya kubuchwepheshe nasemakethe bakuhambisa futhi, kuqinisekisa ukuthi kuzoba umkhuba ongalungiseki. I-Digital Twin ifana kakhulu nezinga lesi-3 lendlela ye-BIM kepha manje kubonakala sengathi kuzoba yibo Izimiso zeGemini lokho kuzomaka umugqa wendlela.
Ekuvuseleleni i-ProjectWise 365-usebenzisa i-Microsoft 365 ne-SaaS-technology-based services-based web - ifu- kanye nokusetshenziswa kwedatha ye-BIM kunwetshiwe, okuvumela izinsizakalo ezinjenge-iTwin ukuthi zihlale zitholakala kuzo zonke izinhlobo zokubuyekezwa futhi kuwo wonke amazinga azo zonke izinhlobo zezinkampani. Ngomqondo obanzi, nge-ProjectWise 365 labo ababambe iqhaza kuphrojekthi bangaphatha konke okuhlobene nephrojekthi (ukwakhiwa kwesitolo, ukuphatha ukuqhutshwa komsebenzi ngokusebenzisana, noma ukushintshanisa okuqukethwe).
Abasebenzisi -professionals- bangafinyelela iTwin Design ukubuyekeza, ukuze baxhumane nephrojekthi ngendlela engaphenduki, ukuzulazula phakathi kokubukwa kwe-2D ne-3D. Manje, labo abazosebenzisa leli thuluzi kumaphrojekthi, ngokuhlanganiswa kwabo kweProjekthiWise, kungenzeka ukuthi bawashintshe amawele ledijithali yephrojekthi, begcina ukuthi izinguquko zenzeka kuphi futhi nini. Zonke lezi zici zizotholakala ngokuhamba kwesikhathi kulo nyaka 2019.
"Amawele wedijithali yengqalasizinda nokwakhiwa konjiniyela aya phambili nalezi zimemezelo, ikakhulukazi ngezinsiza zethu ezintsha zamafu. Abasebenzisi be-ProjectWise, isoftware ye-BIM yenombolo ye-BIM 1 esifundweni esisha semakethe ye-ARC, benze i-Bentley yaba ngomunye wabasebenzisi be-ISV abakhulu be-Azure. Sandisa izinsizakalo zethusi zefu zeProjekthiWise 365; yenza izinsizakalo zefu ze-iTwin zitholakale kabanzi ngokubuyekezwa komklamo kokubili kwezezinga kanye nephrojekthi; futhi kwandiswe ukufinyelela kwe-SYNCHRO ngezinsizakalo zefu. Ukulethwa kwamaphrojekthi wengqalasizinda kusekwe ngesikhathi, kanye nasikhala. Okwakhiwa kwedijithali kwe-4D nokwakhiwa kwamaphrojekthi kuqhuba intuthuko edijithali yobunjiniyela bengqalasizinda, namuhla, emhlabeni wonke! »UNowa Eckhouse, iphini likamongameli omkhulu wokulethwa kweprojekthi kwe-Systems yakwa-900
Ngokuqondene nezinsizakalo zefu I-SYNCHRO Abasebenzisi be-900 Systems bangakhiqiza amamodeli ukuphatha ukwenziwa kwamaphrojekthi, idatha enkundleni noma ehhovisi, kanye nemibono yazo yonke imisebenzi, amamodeli ngisho namamephu akhuthaza ngempumelelo ukubanjwa kwedatha futhi anciphise ubungozi bokuthi kwenzeke ezinye izehlakalo Kuko konke okungenhla, ukuhlanganiswa kweqiniso okungathandwa kwabathelisi esikubona ngeMicrosoft Hololens 2 kuyangezwa, kuholele ekubukeni kwe4D kwemiklamo yamaphrojekthi, okuwukuthi, ukubonwa nge-4D kwamawele ledijithali.
Umndeni wakwa-900 Systems ujoyina ubuchwepheshe obunjenge-Global Mobility Simulation Software (CUBE) - Amacembe, ukuhlaziywa (i-Streetlytics), nokunye okuhlobene nokuphathwa kwedatha ye-geospatial, i-Orbit GT evela kumhlinzeki wase-Belgian Orbit Geospatial Technolgies - enikezela isoftware yemephu ye-3D, i-4D topography, iqoqo ledatha nge-drones.
Lokhu okutholakele kuyingxenye yobuchwepheshe obuthuthukisiwe obuthuthukisiwe, lapho ukuhlelwa kwamadijithali amadolobha kungathuthukiswa. Ukuthola idatha kusuka emadolobheni nge-drones, kususelwa ku-4D - Orbit GT- topography, ukufaka imininingwane kwizicelo ezifana ne-Open Roads - Bentley futhi kukhiqizwa okwenziwe nge-CUBE, ingqungquthela yedatha yempahla ekhona iyatholakala futhi isondele yakhelwe, lapho umhlaba wangempela ulingiswa khona.
Ukuboniswa kwangempela kwalawa mathuluzi, kuvumela ukukhomba isimo nokusebenza kwezakhiwo nengqalasizinda, - le ngenye yezinhloso zalokhu okutholwayo. Ngemuva kokuthola yonke imininingwane engokoqobo, nensizakalo yefu ye-900, labo abanentshisekelo bangafinyelela le datha, baqinisekise amawele ledijithali.
«Sijabule kakhulu ngokuba yingxenye ye-Bentley Systems. Amakhasimende ethu kanye nabalingani bethu bazoba nethuba elihle lokuhlanganisa ngokuphelele ukuhlela, ukuklama kanye nokusebenza kwezinhlelo zokuthutha ezinhlobonhlobo. Ama-cililabs, umsebenzi wethu bekulokhu ukuvumela amakhasimende ethu ukuthi asebenzise idatha esekwe endaweni, amamodeli wokuziphatha kanye nokufunda ngomshini ngemikhiqizo yethu ukuqonda nokubikezela ukunyakaza emadolobheni ethu, ezifundeni nasezizweni. nohambo oluhlelelwe ukuthuthukisa ukwakhiwa kanye nokusebenza kwezinqubo zakusasa zokuhambisa «. UMichael Clarke, umongameli kanye ne-CEO yeCitilabs
Ngamafuphi, silindelwe isonto elihehayo. Sizoshicilela izindatshana ezintsha ezinsukwini ezilandelayo.
Thumela Previous«Langaphambilini Ukuchazwa kabusha kwe-Geo-Engineering Concept
Post Next Ukuhlanganiswa komklamo - ukuzibophezela kwi-BIM esezingeni eliphakeme ngamawele weDijithaliOkulandelayo »